Mai Chibwe VekwaZimuto: Kana mapedza urume hunoendepi?
Ndichazotaura pano nenyaya yokuti urume hunosiiwa nemurume mukati memukadzi hunoerera kuzhe hwese here. Paitika RESEARCH inoda kuti timboitaura mamirire enyaya nokuti zvinotaridza zvakawanda. Ndichadzoka vhiki inouya tozotaura.
Pane vanhu vaya vanohi ma Scientist vakaongorora mafambire enyaya dzokuvatana kubva kare kare. Nyaya yainetsa ndeyokuti sei murume umwe noumwe achigadzira urume (semen) hune mhodzi (sperm) dzakawandza zvokukwanisa kugadzira vana vakawanda kupfuura vanhu vari kugara Mupasi rese iko kuchingodiwa imwe chete kugadzira mwana umwe chete pakuitisa mukadzi umwe chete mimba? Dzimwe mhodzi basa radzo nderei?
Ukada kufunga kuti nyaya iyi yakamira sei uchaona wega kuti kana uri SCIENTIST uchanetseka nokuda kuziva kuti zvinofamba sei. Pane nyaya dzakawanda dzinoda kuongorogwa asi isu pano toda kungotaura neshomanana dzokuti urume hunoendepi kana hwasiiwa mumukadzi uye zvinorevei.
Kune hunobuda mukuvhinza kwechitubu kana mapedza. Wega ukapedza kuiswa ukavhara makumbo ukada kubatwa nehope, unohwa kuti hazviiti. Urume hunosekenyedza huchierera zvinyoronyoro huchibuda muchitubu. Unotohwa huchierera huchipfuura nokuburi retsvina huchodonhera pa tawero rawagara wawaridza pamubhedha iri ngari yokuziva kuti huchabuda muchitube. Chinoita hubude ndechokuti chitubu chinongochurika kana chine chimwe chinhu mukati. Murume paanongovhomora chombo chitibu chinosachichivharika, mativi acho osvina urume hwasiiwa nomurume, humwe hwobuda kuno kumuromo, humwe hwofosiwa kunanga kumukova wechibereko kundotsvaka zai rokuitisa mwana.
Vanhu vakasiyana nedzimwe mhuka pakuti tinokwanisa uye tinokara kuisana nguva kana ipi zvayo. Dzimwe mhuka dzinongoisana kana mhukahadzi iri panguva yokukandira zai.
Urume hukasiiwa mumukadzi, hunoita mazuva anopfuura mana huri upenyu saka panguva iyi unokwanisa kuita mimba. Zvinoreva kuti nyaya dzokuisana idzi dzine zvakawanda. Ukavata nevarume vaviri panguva yemazuva okukandira zai haungazivi kuti baba vomwana ndevapi. Izvi zvinoreva kuti kana uri murume ukavata nemukadzi wemunhu, iye aka vata nomurume wake pasina kupera mazuva mana, kungodhidha muurume hwemuridzi wemukadzi. Iyewo paanozovata nomukadzi wake kungodhidhawo mune hwako.
Zvino chinhu chinozikamwa kuti munhu ane musha akatanga kuhure anotangazve kuwedzera kuvata newaari kuhurira wacho. Toti mukadzi akatanga kuhura, anowedzera rhoji kumba nomurume Saka varume vacho vese venge vava kungo pakurirana urume mukadzi achiita vokugovanisa. Kotizve vanhukadzi vanonetsa kubata kana vachihura zvinoreva kuti anoita nguva refu varume vachingogovana urume hwavo.
Kune humwe urume hunosara mumakoronga emukati mechitubu huchiita basa rokuona kuti PH yomukati mechitubu yakanakira kurarama kwemhodi dzeurume kuti husakasira kufa. Hwese hwasara umu huchapedzisira hwabuda nenyaya yokuti chitubu chinogarosinira zvokutonyorovesa bhurugwa. Zvinobudapo zvinovhengana neurume hwafa zvobuda kuti chitubu chigare chakachena pane kuti chisingadai chaizopedzisira chazara zvokuti munotadza kuisana. Kuti izvi zvisaitika uye kuti muchitubu musaita BACTERIA dzakaipa, chutubu chinozvisuka chichibudisa tsvina yese. Uchaona kuti ukabva kumwedzi chinovhinza kupfuura panguva yokukandira zai.
Koitazve humwe urume hwange husingazikamwi kuti hunoendepi . Zvakazoonekwa kuti munhu kadzi umwe noumwe akambovata nomurume ane DNA isiri yake mumuviri wake. Koonekwazve kuti vakadzi vakambovata nevarume vakawanda vane DNA dzevarume vakawandawo kureva kuti pese paunovata nomurume, unopiwa DNA yemurume iyeye muurume hwake wobva waichengeta upenyu hwako hwese. SYSTEM iyi inohi MICROCHEMERISM iri kutaugwa nezvayo mazuvano nokuda kwekuti vanhu vanotenda Mwari vava kuti ivo inyaya inoreva kuti mukadzi umwe chete anofanira kungovata nomurume umwe chete.
Vanhu vakatarisa nyaya iyi vakawana DNA yevanhurume iri kuBRAIN yevanhukadzi vavaiongorora. DNA yomunhurume inoonekwa nokuda kweinohi Y-CHROMOSOME isingawanikwi mumunhukadzi. Ndosaka zvichizikamwa kuti zvakabva kuvanhurume nokuti munhukadzi haazvagwi anazvo kuzhe kwezvakabva kuna baba vake. Hino DNA yese yakabva kuna baba vake hainetsi kuwana nokuti ndiyo yakaita kuti ave munhukadzi. Munhurume ndiye anoita kuti mwana ave musikana kana mukomana. Mai vemwana kungotakura zvaiswa nababa chete nokuzozvara.
Vanotizve kana uchivata nomukadzi akambovatwa naye noumwe murume zvinoreva kuti paunomuisa urume hwako iye muviri wake unenge watori ne DNA yovamwe varume vaakambovata nano.
MECHANISM yekuti anotora sei DNA iyi kubva muurume hainatsi kuzikamwa asi pane nyaya dzakati wandei dziri pa MICROCHEMERISM apa. Pane nyaya dzekuti
1 ukasvodza unosarira une DNA yemwana wawanga wakatakura
2 Unosarazve une DNA yomurume ange akupa mwana iyeye
3 Ukazvara mwana ndizvozvo futi
Asi kune vakadzi vakawanikwa vane DNA yevarume asi vasina kumboita mimba zvinozikamwa Kureva kuti DNA iyi vakaiwa pakuiswa chete. Zvoonekwazve kuti mahure emari uye mhombwe dziya dzinongoda zvokuiswa kwemuraini nomunhu upi zvake vese ava vane DNA dzevarume vakawanda. Ndoosaka zvakazohi DNA iri kubva paurume nokuti hapana mamwe maperindire ayaikwanisa kuita kuti isvike muBRAIN dzevakadzi ava. Saka nyaya yasara ndeyokutarisa MECHANISM yokuti mukadzi anotira sei DNA kuurume uye kuti mukadzi waiswa wacho anochengeterei DNA iyi mumuviri wake upenyu hwake hwese.
Zvigwere zvinobva pa DNA yevarume iyi:
Zviri kuhi izvo kana munhukadzi ati kurei, DNA iya yaange achichengeta mumuviri wake ichibva kuvarume, inokonzera zvimwe zvezvigwere zvinohi AUTO IMMUNE DISEASES asi hapasati pabudiranwa pachena kuti nyaya yezvigwere izvi iri papi chaipo asi zvinozikamwa kuti chikonzero iFOREIGN DNA iri mumuviri wemunhukadzi.
Yambiro inobva apa ndeyokuti varume vaya vanoda zvokungobudabuda mumba, shandisai makondhomu uye hurai nevanhu vachiri vechidiki. Ukaterera varume vanohura unohwa vachiti ivo ukatanga kuhura nomunhu ava munhu mukuru, zvinonetsa kuzorega nokuti vakadzi vakura vanoziva kubata murume zvokutenderedza fungwa dzake asi chisingazikamwi nevarume ava ndechokuti mukadzi akadai anotori neDNA dzevamwe varume mufungwa nomumuviri wake.
Koitazve vasikana vanohura nezvidhara zvinoshandisa chombo pamukadzi wemumba zvobva zvondokwirana nevasikana vadiki zvese nevakadzi vemuraini. Iwe unopiwa zvese zvauiwa nazvo kubva kwese uku. Zvinohi vasikana vanoiswa pasina kondhomu vanokasirawo kuzoita CANCER yemuromo wechibereko iri kutowanda. Mazuvano kwakauya IMMUNISATION ye HPV inova VIRUS yechihure yange yazara, zvikuru kuzvisikana zvechidiki muUSA ne Europe.
Saka todiiko isu tichida kuhura?
Zvinohi shandisai makondhomu pese pese pamunohura. Kuhura kana wakutanga kunonetsa kuregera nokuti hure ihure chete kusvika ava munhu akwegura. Tinoona chero mumaCHURCH chaimo umu munhu anotanga kupinda CHURCH kuti arege kuhura asi kukangopera kanguva kadiki ototangazve kuhura. Saka chiri nani ndechokuti toudza vanhu kuti regai kuhura asi kana wazvipira kuhura chizamawo kushandisa makondhomu.
Asi iwo makondomu acho anongoshanda pakunopinza chombo muchitubu. Munhu anoita zvekuhura munhu anofarira zve RISK zvokuti chero akada kushandisa kondhomu, anoita zvimwe zvinhu zvakaita sokumwanana mazamu nokusvetana chombo nebhinzi zvokuti ZEMO rinokwira rokwidibira fungwa munhu wozoti pepu apedza kuisana. Kana wakaroorana nomunhu anogona kuhura zvinonetsa kumusungira sembwa. Kana uri murume mukadzi wako achihura unokwanisa kuita makore kana gumi usingazivi kuti anohura. Varume vanofunga kuti ndivo shasha pakuhura asi vakawanda vavo vari kuhurigwavo, kunhoti havazivi.
Hwisisai kuti zemo rine simba kupfuura fungwa saka chakanaka ndechokungoona kuti hauna kuzviisa pane mukana wekuhura kana usingadi zvokuhura. Kana uri munhukadzi kana wahura wotogara ne DNA yomurume wacho kusvika wafa.
Posted by Mai E Chibwe at 15:10
Mai chibwe makadii mubvunzo wangu uripakuti ungaitesei kuti usakurumidze kudiridzira mukadzi asati atunda ingave problem yeyi inorapwa nei after 2 minites watodiridzira
Mishonga yamunomhanyira iyi kana watanga kuushandisa zvinozonetsa kusaushandisa. Zamai kugadzirisa nyaya pasina mishonga.